Isoftware ye-Forex Account Management, i-Forex Mt4 Multi Account Manager, ama-akhawunti amaningi we-FX | I-FXCC
Ikhaya / Amapulatifomu / PC / Multi Umphathi we-akhawunti
Abathengisi abaqeqeshiwe abane-akhawunti amaningi nabaphathi bezimpahla badinga amathuluzi enza ukuphatha ama-akhawunti amaningi alula futhi aphephile.
Lapha ku-FXCC siyaziqhenya ngokuxazulula izinkinga ngaphambi kokuba zivuke. Yingakho sinikeza abathengisi abaningi be-akhawunti nabaphathi bemali isofthiwe ye-MetaFx MAM (iMenenja ye-Multi Account Manager). I-MAM inezinzuzo ezibalulekile ngaphezu kwamapulatifomu afana ne-MetaTrader Multi Terminal isibonelo.
Uhlelo lokusebenza lwe-FXCC MAM lufanelekile uku:
Abahwebi Abaqeqeshiwe noma Abaphathi Bamali abadinga ukuthengisa ama-akhawunti amaningi we-MT4 ngesikhathi esisodwa
Abahwebi abadingayo ukubuka isimo se-akhawunti nomlando kuma-akhawunti amaningi
Abathengisi abenza ukuhwebelana kweqembu egameni lama-akhawunti amaningi
Isixazululo sethu se-Multi Account Manager sisekela:
Ukukhishwa okusheshayo, ukulawula i-Broker & izibuyekezo zesiphakeli ezilula ngokusebenzisa i-plugin side plugin
Ivumela ama-Expert Advisor (EA) ukuhweba kwama-akhawunti aphethwe kusuka ohlangothini lweklayenti
Isicelo se-Client Side Software sokulungiswa kwepharamitha yokuhweba
Ama-akhawunti wokuhweba angenamkhawulo
I-STP ku-akhawunti enkulu yokukhishwa kwe-bulk, ngokunikezwa okusheshayo kuma-akhawunti angaphansi
Amatayitela - Ama-akhawunti ajwayelekile kanye namancane ama-Lot for best benefit benefit
"I-Group Order" ukukhishwa kwesikrini sokulawula okuyinhloko
Ukuvalwa okukodwa kwama-oda okwenziwa yi-Master akhawunti
Ukusebenza okugcwele SL, TP & Ukulinda okulindile
I-Akhawunti ngayinye ephansi inomphumela wokubika kwesikrini
Iwindi lokubuka iMakethe ngaphakathi kwe-MAM
Ukuqapha ukuphathwa kwe-Live Live ngaphakathi kwe-MAM kubandakanya i-P & L
I-MAM inikeza izinketho eziguquguqukayo kakhulu ezenzelwe ukuhweba:
Ukunikezwa kweLoti: Umqulu unikezwe ngesandla kuwo wonke ama-akhawunti
Ukunikezwa kwamaphesenti: Amaphesenti wevolumu yenani lezentengiselwano ku-akhawunti enkulu inikezwa ngesandla ku-Akhawunti ngayinye.
Ukulinganisa ngokulinganisa: Isici Esizenzakalelayo esibala ngokuzenzakalelayo iphesenti yokulinganisela ku-akhawunti ngayinye ephansi kuya ku-akhawunti enkulu, futhi ngokwenza kanjalo usakaze ivolumu ethathwe kwi-akhawunti enkulu kuwo wonke ama-akhawunti asebenzayo.
Ukulandelana nge-Equity: Isici Sokuzenzakalela esibala ngokuzenzakalelayo iphesenti yokulingana kwi-akhawunti ngayinye encane kuya kwi-akhawunti enkulu, futhi ngokwenza kanjalo usakaze ivolumu ethathwe kwi-akhawunti enkulu kuwo wonke ama-akhawunti asebenzayo.
Ukunikezwa kwamaphesenti: Kulesi sici, iMenenja ye-Akhawunti ichaza% ye-equity okufanele isetshenziswe ngezohwebo, lapho i-X% ye-equity isetshenziselwa yonke into.
Ama-akhawunti Nge-Ukufakwa Unlimited
I-Post Post Price Price
Ama-Akhawunti Amasha Asheshayo
Esinye sezici ezithandwa kakhulu ku-MT4 yikhono lokuthengisa ngqo kusuka emashadi. Lokho kuthatha isofthiwe yethu ye-MAM, ngakho-ke manje usungathengisa ama-akhawunti amaningi ngokusebenza kahle kwe-chart.
I-akhawunti ye-FXCC Multi Account Manager isemkhawulweni wezobuchwepheshe zokusingatha ama-akhawunti amaningi. Uhlu lwesici luyamangalisa futhi luzohlehlisa ukuphathwa kwama-multiple forex yokuhweba ama-akhawunti.
Ngicela uqaphele: Isoftware ye-MAM uhlelo lwesithathu. Noma yiziphi izinkinga zobuchwepheshe noma zokusekela kufanele ziqondiswe ku-MetaFX.